Fanodinana - Asa tanana | Asa-tanana (Pejy 3)
Klioba fanoloran-tena amin'ny fitaovana fanodinana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana club juggling amin'ny akora voaverina. Miaraka amin'izy ireo ianao dia ho gymnast tsara amin'ny vidiny ambany.
DIY: boaty fanomezana boaty
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanaovana boaty fanomezana. Hevitra tonga lafatra amin'ny Krismasy, tsingerintaona na karazana fankalazana hafa.
Afovoany misy chestnuts, ravina ary voninkazo maina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hananganana afovoany tsara tarehy amin'ny latabatra fisakafoanao. Hevitra tsara handravahana ny latabatra ho an'ny Krismasy.
Snowman handravaka, manomboka ny nofinofy Krismasy isika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana snowman kely mahafinaritra. Ity no ho haingo voalohany hapetrantsika ao an-trano mandritra ny Krismasy.
Haingo manokana ho an'ny boaty vita fanodinana
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba handravahana ireo boaty manodidina ny trano ary tsy misy ilana azy. Noho izany, omentsika azy io hampiasa azy ireo indray.
Mug misy marika manokana
Lahatsoratra momba ny haingon-trano. Izy io dia manazava ny fomba haingo ny mug misy marika maharitra.
Fiaran'ny ankizy vita amin'ny tavoahangy plastika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana fiara tsara tarehy ho an'ny ankizy, miaraka amina tavoahangy plastika. Fanodinana 100%.
Tavoahangy plastika mampihomehy
Ampianarinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hanararaotana ireo tavoahangy namboarina, hanaovana asa-tanana mangatsiatsiaka ary hahafahanao mankafy ny ankizy.
Tavoahangy elefanta vita amin'ny kapoaka
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana stilts mba hahafahan'ny ankizy milalao mahafinaritra. Vita avy amin'ny kapoaka izy ireo, koa mamporisika ny fanodinana.
Tavoahangy voaverina handravaka ny trano
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny teknika haingo mba hahafahanao manamboatra tavoahangy taloha. Araka izany, hofenoinao jiro ilay zoro manjavozon'ny trano.
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra anao izahay hitandrina ny filaminan'ny latabatra ho an'ny ankizy amin'ny alàlan'ny mpikarakara ho an'ny kojakojam-pianarana.
Pushpins tany am-boalohany voaravaka ho antsika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana sy hanaovana paompy vaovao hahafahanao mandravaka ny bosoa ao amin'ny efitranonao.
Kitapo vatomamy vita an-trano ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mampianatra anao ny fomba fanaovana harona vatomamy vita an-trano mba homena amin'ny lanonan'ny ankizy ho an'ny ankizy, toy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo.
Lolo mahatsikaiky vita amin'ny taratasy fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana lolo lamaody mahafinaritra miaraka amin'ny horonana taratasy fidiovana. Amin'izany fomba izany dia handany ny tolakandro feno amin'ny ankizy ianao.
Araraoty tsara ny satrokao taloha
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fanavaozana ny fonosana taloha, mba hanohizanao hampiasa azy ireo matetika nefa tsy ho very ny glamor.
Fandriana mandry, hevitra tsara hialana sasatra amin'ny aloky ny hazo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fihodinanan'ny olon-tsotra, satria tsy ny kodiarana mahazatra io, fa ny fandriana savily vaovao hampiadana mora foana.
Fialamboly kilalao baolina tenisy amin'ny zavatra rehetra
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fampiasana indray baolina tenisy izay tsy dia misy fitaovana firy. Mba hanaovana saribakoly nivadika hanger.
Penina amin'ny kapila solosaina
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manampy anao hamerina handefa ireo zavatra solo-saina efa lany andro, toy ny kapila misy floppy, mba hamadika azy ireo ho pensilihazo tsara.
Coasters sy placemats miaraka amin'ny takelaka magazine
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba hanararaotana ireo gazety taloha izay tsy ampiasainao intsony, mba hanaovana mpandahatra amoron-tany sy toerana misy azy.
Rhinoceros vita amin'ny mpanadio fidiovana
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana rhinozila mahaliana sy mampihomehy amin'ny fanadiovana fidiovana tsotra fotsiny.
Boaty pizza misy boaty, fanodinana Smart
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana asa tanana avant-garde miaraka amina boaty pizza tsotra.
Haingo amin'ny fampirimana, tsara ho any an-tsekoly
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanavaozana sy ny fanararaotana ireo lahatahiry taloha. Haingo vaovao mahafinaritra hiverina any an-tsekoly.
Biby an-dranomasina vita amin'ny plastika
Mampianatra anao izahay ato amin'ity lahatsoratra ity mba hanao biby an-dranomasina mahafinaritra amin'ny plastika, mba hahafahan'ny ankizy milalao mahafinaritra.
Lolo miaraka amina paompy
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana lolo mahafinaritra miaraka amin'ny paompy. Manararaotra ny fotoana miaraka amin'ny ankizy.
Maracas vita amin'ny kapoaka yaourt
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra anao izahay hanao maracas tsara tarehy misy vera yaourt, amin'izany fomba izany dia hahafinaritra ny ankizy ny gadona mozikan'izy ireo manokana.
Kaontenera fitehirizana kilalao
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana kaontenera hitahirizana kilalao misy tavoahangy tsotra 5 sy 8-litatra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana satroboninahitra volom-borona tsara tarehy, tena ilaina amin'ny volon'ondry ny akanjo Indiana amin'ny faran'ny fetin'ny taom-pianarana.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao fa amin'ny zavatra izay tsy tadiavinay intsony dia afaka manao firavaka vaovao sy azo ampiharina izahay. Ny fampiasana indray no tsara indrindra ho an'ny rehetra.
Kitapo mahatsikaiky vita amin'ny tavoahangy plastika
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba hanaovana kitapom-bola mahatsikaiky amin'ny tavoahangy plastika izay tsy ampiasainao intsony. Fanomezana lehibe ho an'ny namana.
Haingon-trano voninkazo soavaly wicker
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba handravahana harona wicker misy voninkazo vita amin'ny fitoeran'ny alimina. Fanodinana 100% sy faharetana feno.
Fanodinam-bokatra: Ladybugs misy baoritra atody
Androany amin'ny Crafts on dia hanao kilalao simika isika. Ho an'ity dia hampiasa atody boaty iray izahay. Miditra ve ianao?.